DAHALO 40 LAHY NANAFIKA TAO TOLIARA II : Tafatsoaka ny ben’ny tanàna, naratra mafy ny vadiny
Ny alin’ny alahady tokony ho tamin’ny 11 ora tany ho any, dahalo manodidina ny 40 lahy no tonga nanafika tao amin’ny Kaominina Andranovory Toliara II. 5 juin 2019
Vokany, ny trano nisy ny Ben’ny tanàna tao an-toerana no voalaza fa novakin’ireo olon-dratsy tamin’io fotoana io. Tafatsoaka ary avotra soa aman-tsara ny ain’ilay Ben’ny tanàna raha ny loharanom-baovao voaray saingy ny vadiny no tratran’ireo olon-dratsy tao an-trano, izay voadaroka mafy ary voa teo amin’ny lohany.
Raha ny tatitra hatrany, dia nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika izy ireo, ary novakian’ny tamin’ny fitaovana manokana ny varavarana ka tafiditra tao an-trano. Manao antso avo amin’ny mpitondra isan-tsokajiny izy ireo mba hijery akaiky ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana fa dia tsy matory andro aman’alina ny mponina raha ny tatitra sy fitarainana.